Izindlela zokuhambela izitshudeni ukuthi ngabe abafundi bathathwa njenge &quot;modeli abakhona&quot;. Umuntu &quot;oyisibonelo&quot; ungumfundi ofunda okungenani ama-96% wezinsuku zakhe ezibhalisiwe ngonyaka wesikole (ophikelelayo obekhona); noma umfundi othuthukise ukungena kwakhe okungenani ngamaphoyinti okungenani amathathu kusuka kowandulela unyaka wesikole samanje (ukuthuthukisa ababekhona). Ukuhanjwa kwabafundi kubheka nephesenti labafundi abangahambi isikhathi eside, noma abalahle ngaphezu kuka-10% wezinsuku ezibhalisiwe ngonyaka wesikole. Abafundi kuphela abasebenzisa iningi lonyaka wesikole ababhalise kulesi sikole abafakiwe lapho bebika inani labafundi abakhona. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole ka-2018-2019)
Amaphethini wokufika kwabafundi kulesi sikole?
Izindlela zokuhambela izitshudeni zokuthi izitshudeni zibhekwa “njengabangenayo imodeli” ngokubonisa ukubakhona okuqhubekayo noma ukuhambela phambili kwabafundi ngonyaka wesikole. Ukungayi emsebenzini isikhathi esilinganayo yizinga labafundi abebephumile esikoleni okungenani amaphesenti ayishumi ngonyaka wesikole, nganoma yisiphi isizathu.
Isilinganiso Sombuso 65.3%
Isilinganiso Sombuso 61.9%
Isilinganiso Sombuso 18.3%
Isilinganiso Sombuso 13.7%
Ingabe abafundi bakulesi sikole basebenza kanjani uma kuqhathaniswa nemigomo yesikhashana yesifundazwe yokuhambela abayizibonelo?
Okuhlosiwe kwesikhashana kukhombisa inqubekelaphambili elindelekile edingekayo ukufeza izinhloso zesikhathi eside zombuso zokuhambela amamodeli.